Mkpebi ụtụ na mgbakwunye ịbubata na ngwongwo ọcha
Nadir Küpeli, Onye isi oche nke oflọ Ọrụ Nchịkwa nke Eskişehir OSB, na-akwado ụlọ ọrụ nke mba ahụ iji nọgide na-emepụta ma na-asọmpi n'oge oge ụtụ isi ụtụ ahịa agbakwunyere, nke a ga-etinye na ọnụego dị iche iche ruo pasent 30. [More ...]
Ministri nke Ezinaụlọ, Ọrụ na Ọha na Ọha na aga n’ihu mbọ ọ na-agba iji hụ na ndụ ọrụ ahụike na nchekwa na usoro COVID-19. Ministry of ize ndụ nwere ike hụrụ si akpa oge nke ntiwapụ na Turkey, kpọkwasịwo ụlọ ọrụ na-ọzọ [More ...]
Okwesiri Ka Itinye Aka Oku Maka Mmekorita N’amalite Ulo akwukwo
Àjà elu ụmụ akwụkwọ gburugburu ụwa ohere ahụmahụ oru mbụ aka na Turkey maka oge mbụ nke afọ a ẹkenịmde ke Izmir Aegean Young Business People Association na mmekorita Diamond Challenge omume Covidien-19 [More ...]
Onye na-ahụ maka ezinụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Zümrüt Sel ofuk kwuru na ha ewerela usoro ọhụrụ iji chebe ndị otu ejikọtara na General Directorate for Dis nkwarụ na Ndị Ọrụ Okenye si na COVID-19. Ndi nwere nkwarụ na ndị okenye [More ...]
GUHEM Ga-abụrụ Childrenmụaka Ndị Ọhụrụ Ọsọ Onyinye
Enyere Bursa nkwado na nkwado nke Bursa Metropolitan Municipal na TÜBİTAK n'okpuru onye isi nke Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO); Gökmen Space Aviation Training Center (GUHEM) onye emere ka emepe emepe ya ka oge na-aga n'ihi ọrịa coronavirus, [More ...]
Emechara uzo mbu n’ime usoro nghazi nke ndi oru njem njem 10, tinyere umunwanyi iri, ndi nwere ihe ịga nke oma n’ime akwukwo edere ede na oru bara uru na General Directorate of EGO. Ise n'okpuru Director nke Bus Operations [More ...]
Ọrịa nje Corona (COVID-19), nke nwere mmetụta n'akụkụ ụwa niile, emetụtakwala nrụpụta F-35 Lightning II, otu n'ime ọrụ nchekwa kachasị n'ụwa. Ngalaba U.S. Maka Nchebe Pentagon otu onye na - ebubata ngwa agha na [More ...]
Njikwa Corona nke Gaziantep gbara ọsọ na Ọha Ọha
N'ime oke ọgụ nke Corona Virus (COVID-19) nke Gaziantep Obodo ukwu, n'ime ụgbọ njem ọha nke obodo; Nleta maka irube isi n'iwu dịpụrụ adịpụ nke ọha mmadụ, igbochi ikike ndị njem jupụta na ịga njem na-enweghị nkpuchi. ụwa [More ...]
Usoro dị mfe a ga-etinye n'ụlọ, ọkachasị ịdị ọcha, na ọgụ a na - alụso coronavirus nwere ike ịbụ nnukwu nnukwu mkpa iji kpochapụ ihe ndị gbasara ibute ọrịa. Sabri Ülker Foundation emeela ka ọha mmadụ chee banyere ozi dị mkpa ọ si na ụlọ ọrụ nyocha ụwa. [More ...]
Peker: 'A ga-akwụsị imepụta ihe na TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ na TÜVASAŞ'
Ationgbọ njem na ndị na-arụ ọrụ okporo ụzọ Union Union Abdullah Peker coronavirus na TirusDEMSAŞ TÜLOMSAŞ mere nkwupụta akụkọ na T pressVASAŞ. Peker kwuru na ekwesịrị ịkwụsị mmepụta ya na nkwupụta ya. Nkọwa zuru oke dị ka ndị a: Nke ikpeazụ [More ...]
İpekülük Caddesi ga-enwe ọhụụ ọhụụ mgbe e mesịrị na Bursa
Ndi isi obodo Bursa megharịrị site na mbido rue İpekcılık Caddesi, nke nọ na mmemme ahụ ihe dị ka afọ iri na otu. Site na ọrụ nke ụlọ ọrụ akụrụngwa niile, okporo ụzọ ahụ ga-enyocha ọhụụ ugbu a ọtụtụ afọ gachara. [More ...]
Ọchịchị Döşemealt continues na-aga n'ihu na mkpokọta ya na mkpochapu ya na oke ọsọ dịka akụkụ nke mbọ ndị a rụpụtara n'ihi ụdị ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ (Covid-19). Ndị otu ahụ na-asacha akụkụ niile nke district fọrọ nke nta ma jikọta ya na Halil na ọkụ mbụ nke ụtụtụ [More ...]
Ingdọ aka na ntị site na 11 Metropolitan Mayors nke CHP
11 Mayors Metropolitan nke CHP dọrọ aka ná ntị ọzọ ka ha ghara ime ihe ndị a na-agbanweghị agbanwe iji lụsoo ntiwapụ nke COVID-19, ma mee mkpebi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Ndi isi, otutu ndi sayensi, [More ...]
Ntinye ego ndi ozo na oru ndi ozo na ulo oru Bosch na Bursa
Minister nke Mmeputa na Teknụzụ Mustafa Varank kwuru na enwere ozi ọma sitere na ntinye ego na ndị si mba ọzọ n'ihu ụbọchị ndị a, nke na-alụ ọgụ maka ụdị coronavirus ọhụrụ (Covid-19). [More ...]
İmamoğlu Nyochaa Agenda nwere ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Rail
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu bidoro nleta nleta nke ndị ọrụ nwere ọrụ na usoro mgbasa ọrịa coronavirus ma rụọ ọrụ ọha. İmamoğlu mere nleta mbụ ya n'okporo ụzọ ụgbọ ala na ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị na-ekpofu ahịhịa, [More ...]
Ọrụ Feverish dị na Bursa City Square Ihe Nkiri Ọgbọ
Obodo Bursa gbara ọsọ mee ka ọrụ mmezi mgbazigharị n'okporo ụzọ ụgbọ ala ebe ọpupu okporo ụzọ akwụsịla n'okporo ụzọ Atatürk. Ọchịchị Bursa Metropolitan na-agbasi mbọ ike ijigide ihe kacha ike ya na ntiwapụ 'Covid 19'. [More ...]
Tlọ TCDD ochie mere ka ndị ọrụ nchekwa mara
Ndị ọrụ Ahụike Bilecik Ahụike Ulo nwa oge na ebe izu ike, nke Bilecik Mịnịstrị kwadebere maka ebe obibi na izu ike nke ndị ọrụ ahụike na-alụ ọgụ na nje Covid-19 (corona), etinyere ọrụ. Na Mpaghara Istasyon [More ...]
EGİAD Aegean Young Businessmen Association haziri ihe omume n'ịntanetị na-atụle mmetụta COVID-19 na-emetụta akụ na ụba na ụlọ ọrụ yana ikike dijitalụ nke ndị ọkachamara na-aza ajụjụ na ndekọ ego kwesịrị inwe na ụwa mgbanwe. -eto eto [More ...]